कलेजो खराब हुनबाट कसरी बच्ने ? – Himalaya TV
Home » समाचार » कलेजो खराब हुनबाट कसरी बच्ने ?
कलेजो खराब हुनबाट कसरी बच्ने ?
२० चैत्र २०७३, आईतवार १९:२६
काठमाण्डौ, २० चैत्र । मोटोपनबाट शिकार भएका व्यक्तिले सकेसम्म कम मात्रामा खाना खानुपर्छ । अन्नले अरु अङ्गको साथै कलेजोमा पनि फ्याटको मात्रा बढ्छ ।
लिभर जरुरतभन्दा बढि मोटो भयो भने त्यसको एकमात्र उपचार प्रत्यारोपण मात्र हुन्छ । बेंगलुरुका डाक्टर एसएस सिकोराको अनुसार, यदि फ्याट लिभरको उपचार बेलामा नै भएन भने लिभर सिरोसिसको रुपमा बद्लिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कलेजोले काम गर्न छोड्छ र अन्त्यमा सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव हुँदैन । केवल प्रत्यारोपणले मात्र बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छ । यस्तो स्थितिबाट बच्न मोटा मानिसहरुले आफ्नो खानपानमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खानपानमा सुधार गरेर वोसोयुक्त कलेजो भएका मानिसले वोसोपनामा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । यस्ता मानिसले आफ्नो डाइटमा कार्बाेहाइड्रटयुक्त तत्वको कम सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्नमा कार्बाेहाइड्रटको मात्रा बढि भएका पाउरोटी, रोटी र चामलका परिकार एकदम कम मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ । मोटो मानिसहरुले कलेजोमा बोसो जम्मा हुन नदिनको लागि अधिक मात्रामा प्रोटिनयुक्त तत्व जस्तैः दाल, पनिर, भटमास, माछाआदिको सेवन गर्नुपर्छ ।
पेट फुल्छ तर भोक लाग्दैन भने सतर्क हुनुहोस्
डाक्टर सिकोरा बताउँछन्, ‘यदि पेट फुल्छ, भोक लाग्दैन, खुट्टा सुन्निने, अचानक तौल घट्नुजस्ता समस्या देखियो भने त्यो कलेजो खराब हुन लागेको लक्षण हो ।’ यदि यस्तो समस्या छ भने त्यस्ता व्यक्तिले तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । किनकि आजभोलि यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा एकदम कम मात्रामा मात्र बिरामीको उपचार दबाइले ठीक हुन्छ तर धेरै मानिसहरुलाई सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कलेजो समस्या हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण इन्फेक्सन, धूम्रपान र मद्यपानको अत्याधिक सेवन हो ।
सरसफाईमा ध्यान नदिनाले पनि कलेजोमा इन्फेक्सनको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जसले गर्दा बिस्तारै–बिस्तारै कलेजोमा मासु अर्थात् ट्युमर बढ्छ र त्यसलाई केवल सर्जरीको माध्यमबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ ।